Manoloana io fahakelezan’ny tahan’ireo olona mpanome ra an-tsitrapo io dia tafiditry ny mpikarama an’ady ity sehatra ity. Efa misy mivarotra 80.000 ka hatramin’ny 90.000 Ar mantsy amin’izao ny iray ary mbola lafo lavitra noho izany any amin’ny faritra. Nitondra fanazavana mifandraika amin’izay ny profesora Randriamanantany misahana ny fanomezan-dra eo anivon’ny minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka ka nambarany fa hafa ihany ny ra azo avy amin’ireo mpanome an-tsitrapo sy ireo fianakaviana manana ny tsy salama. Mety ho olona avy nisotro toaka na tsy ampy torimaso mantsy no nivarotra ilay paosin-dra80.000 Ar iny ka mety hisy fiantraikany goavana eo amin’ny fahasalaman’ilay marary. Ho an’ireo mpanome ra an-tsitrapo dia maro ny fepetra takiana amin’izy ireny vao afaka manome ra izy ireny ho fitsinjovana ireo marary mila famonjena.